I-100 I-Polyester Yokususa I-Thread Manufacturer & Umthengisi e-China
I-Polyester kunye neCotton Sewing Threads Manufacturer
I-MH yoSwing Thread Thread: i-Spun Polyester Ukuhlungula Inkqubo, i-Poly / Poly Inkqubo yokuSula, iCotton / i-Poly-core Core Sewing Thread, i-Polyester Ubumba, i-Polyester I-Thread Closing, i-100% i-Polyester High-tenacity Thread, i-100% iNylon ehlanganisiweyo Uluhlu.
Uphuhliso lwangonyaka: I-30000 itoni
umbala: Ikhadi lombala neemibala ye-400 ekhoyo, encinci yohlelo olwamkelekileyo
I-20 / i-2 Jeans, izihlangu, ii-caps, iimveliso zesikhumba, njl.
I-20 / i-3 Jeans, izihlangu, izikhwama, iimveliso zesikhumba, njl.
I-30 / 2 Ubugcisa bezandla, izikhwama, izikhwama zokukhusela, njl.
I-30 / i-3 Jeans, iintente, iimveliso zesikhumba, izikhwama, izihlangu, njl.
I-40 / 2 Iingubo, iingubo, izikhwama, iikhati, njl.
I-40 / 3 Izixhobo zokukhusela, ubugcisa bezandla, izihlangu, njl.
I-50 / 2 Iingubo zokugaya, iingubo zokugqoka, iingubo zangaphantsi, njl.
I-50 / 3 Ubugcisa bezobugcisa, ukuthunga umhlobiso, iimpahla zentsimi, njl.
I-60 / 2 Iingubo ze-Ultrathin, iingubo zangaphantsi, iingubo zokugqoka, njl.
I-60 / i-3 Izambatho, izikhwama, iingubo, iifesti zokulala, iingubo, njl.
I-80 / 2 Ukukhanda kunye neengubo zokuthenga
I-80 / 3 Ngaphantsi kweengubo, iingubo zokugqoka, ingubo epheleleyo, njl.
Iindleko zokuthunga intambo ziphantsi kwe-1% yomkhiqizo wonke wokuthunga, kodwa yinto ebalulekileyo yokugqiba umgangatho wemveliso. Akukho nto encinci kwintambo yokuthunga. Nayiphina impazamo yokuthunga intambo ingabangela inkunkuma enkulu kwiindleko zokuthunga intambo ingaphantsi kwe-1% yomkhiqizo wonke wokuthunga, kodwa yinto ebalulekileyo yokugqiba umgangatho wemveliso. Akukho nto encinci kwintambo yokuthunga. Nayiphina impazamo ekuthungeni intambo ingabangela ukuba inkunkuma enkulu ingabonakali, isambatho, umshini wokuthunga kunye nabasebenzi. Unokukhetha njani intambo efanelekileyo yokuthunga?
Iiparameters ezichaza ukugqithisa okuphezulu komtya zi:
Akukho ziphulo ekuthungeni kwekhawulezi
Ukwakhiwa kokubambisana okuhambelanayo
Ukunyuka, ukukhusela utshintsho kwintlungu ngexesha lokuthunga
Umgangatho ophezulu wokuxhatshazwa
Ukukhawuleza kwaneleyo kwendawo, ukudlula kalula ngokukhokela kumatshini
Indlela yokufezekisa iimfuno zomgangatho ongentla apha?
Umgangatho wendwangu eluhlaza
Isihluthulelo sokuphucula umgangatho wokuthunga intambo yintsimbi eluhlaza, esetyenzisiweyo, kuba ukuba intsimbi eluhlaza ayinasiphelo, kunzima ukuphucula umgangatho kwindlela yokudayisa kunye nokukhenketha. Inkcoko yefayili, i-defect, i-hairiness andstrength iya kuba nempembelelo enkulu kumgangatho wokuthunga intambo, kwaye nayo yinto ebalulekileyo ekuchaphazela ukuhlukana komgca.
Ukumisa inkqubo yokudayisa kunye nokomisa, asikwazi ukucinga nje ngokumalunga nombala kunye nokukhawuleza kombala, sinokukhathalela ngophawu oluthile lwe-fila spindle oluza kuvelisa umgangatho wokuhlaziya umgangatho. Njengoko intambo efanelekileyo i-spindleshape iya kunciphisa izinga lokuphuka ngexesha lokuhlaziya.
Ubume obuhle bebhondi bubaluleke kakhulu ekungagqithweni kwenkqubo ngexesha lokuthunga. Intambo yokuthunga iya kuphulwa ngexesha lokuthuthwa kwejubane eliphezulu, inxalenye yesizathu kukuba i-cone yokuvula ukuxilonga ayihambisani, ngoko kubangela ukuba ukukhululeka ngokukhawuleza kakhulu okanye kuphuze kakhulu, kuya kubangela intambo ephukile xa ukugqithisa kuncipha kakhulu kwaye bekuya kuthintela xa ukungaqali ukukhawuleza kukukhawuleza, kuya kubangela ukuba kuphulwe intambo.
Ukuthunga intambo, yinkqubo ebalulekileyo yokucoca intambo yokuthunga. Sinoomatshini we-SSM we-high-speed TK2-20CT ohamba phambili we-SSM, unomshini we-injection we-Lubetex we-injection, usebenze ngokufudumala kwesigxina esisodwa, esinokuyitshisa i-wax ngokucokisekileyo. ukwenzela ukuba intambo igubuzwe ngokugcwele ngeoli ehlanjayo kwaye ifumane enye imilinganiselo yeoli.
Inkampani yethu iye yaqhubela phambili izixhobo zokuvavanya ukuthunga, ingasetyenziselwa ukulinganisa umonakalo wokuthunga phambi kokunikezelwa, okuqinisekisa ukusetyenziswa komthengi.
Uluhlu lwe-MH lokuthunga lunokunciphisa inani lezintlu eziphukileyo kwiinkqubo zokuthunga, ukuphucula umgangatho wemveliso yokuthunga, ukuphucula ukuveliswa kwemveliso nokunciphisa iindleko zemveliso. Kuya kunciphisa ubunzima bomsebenzi kunye nokwaneliseka kwabasebenzi.
ICOPYRIGHT © 1999-2019 | I-NINGBO MH YARN NOKUBHALA KWEZINTLOKO.